Ngaba ubulungu be-amazon prime bulungile?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ubulungu beAmazon Prime bufanele?
Ngaba ubulungu beAmazon Prime bufanele?
Kwiminyaka emi-6 edlulileyo, Usuku lweNkulumbuso yaseAmazon ngokuthe ngcembe ube ngumnyhadala wonyaka onokubangisana noLwesihlanu oMnyama kuzo zombini izinto zezaphulelo kunye nobukhulu bezaphulelo.
Kodwa iNkulumbuso ifumaneka kuphela kumalungu eNkulumbuso eAmazon. Ke, umbuzo ngulo, ngaphandle kwesehlo sonyaka-ngaba kufanelekile ukufumana i-Amazon Prime kwaphela?
Ewe, makhe sijonge ukuba ixabisa malini kwaye sifumana ntoni:
Ixabiso lobulungu beAmazon: $ 12.99 / ngenyanga okanye $ 119 / ngonyaka
Ilungu eliyintloko leAmazon:
Ukuhanjiswa simahla, ngokukhawuleza
Izaphulelo ezizodwa- fikelela kwangoko kwizaphulelo, okanye usike amaxabiso ongezelelweyo kwizinto esele zinesaphulelo
Ukonga kunye nokuthumela simahla kuthumelo lonyango
Ividiyo ye-Prime-ukufikelela kwiimuvi, iinkqubo zeTV, ii-Amazon zodwa ($ 9 / mo value)
Ukudlala iAmazon -Ukufikelela kwizinto zasimahla okanye ezizodwa kwimidlalo edumileyo. Ubhaliso olunye lwasimahla ngenyanga ($ 5 / mo ngexabiso)
I-Amazon Music -ukufikelela kwiingoma ezi-2 ezigidi. Ungadideki noMculo ongasikelwanga mda, onezigidi ezingama-60 + (Spotify, Apple Music, okhuphisana naye kuMculo ku-YouTube)
Ukufunda okuphambili-Yenza iimagazini kunye noluhlu olujikelezayo lweencwadi zohlobo lwasimahla
Ukugcina iifoto ngokungenamda-enye indlela elungileyo kwiifoto zikaGoogle, ezirhwebesha inkonzo yayo yasimahla
Yiba lilungu leNkulumbuso yaseAmazon apha
Ke, ngokujonga nje izibonelelo ezibonelelweyo, iAmazon Prime inokukuxabisa kubasebenzisi abaninzi.
Umzekelo, ukuba uhlala iTwitch rhoqo kwaye ujonga enye indlela eyiNetflix- unokuxhasa umsasazi wakho owuthandayo ($ 5) kwaye ubukele iPrime Video ($ 9) inyanga nenyanga. Lixabiso leedola ezili-14 / ngenyanga elixineneyo laba yi- $ 13 ngenyanga, ukongeza iitoni zezinto ezongezelelweyo zokuthenga ngaphezulu.
Ukuba uthe kwenzeka nje ngokuthenga izinto ezingahleliwe kwiAmazon rhoqo ngenyanga, unokufumana izibonelelo kwiNkulumbuso. Ukujonga ngokukhawuleza ezinye iitrinki ezingama- $ 10- $ 20 kutyhila ukuba ungasilinganisela ngokulula isaphulelo se- $ 2 kwinto nganye (lowo ngumzekelo olondolozayo). Yongeza ukuthunyelwa kwenkulumbuso kwasimahla ngaphezulu kwento kwaye imali egciniweyo iqala ukufumba. I-13 yeedola ngenyanga ihlawulwa kakhulu ngeeodolo ezimbalwa zeAmazon.
Ukuba uyincwadi yencwadi ezinikeleyo, uya kufumana iincwadi ezintsha, iihlaya, amabali amafutshane, kunye neemagazini ukuze ujonge uhlobo lwakho ngokupheleleyo simahla.
Ifoto yokugcina ifu
Ngaba ujonge indawo yokugcina iifoto zakho? Iifoto zikaGoogle ziyayigqiba inkonzo yasimahla , Oko kuthetha ukuba abantu baya kuhlawula ngakumbi ukugcinwa kwiiseva zikaGoogle okanye bajonge enye indlela. Ukuba sele uhlawulela ubulungu beNkulumbuso- loo nto ikukuhle kakhulu ukuba ube nayo! Amalungu angengowenkulumbuso angabhalisela i-100 GB ($ 2 / ngenyanga), 1 TB ($ 7 / ngenyanga) okanye 2 TB ($ 12 / ngenyanga) kwii-akhawunti zeAmazon. Amalungu eNkulumbuso afumana ukugcinwa okungasikelwanga mda kweefoto zabo kunye ne-5 GB yesithuba seseva kwiividiyo zabo. Ewe, le yokugqibela yeyesezantsi.
INkulumbuso yoMculo vs iNkulumbuso yoMculo engenamda
Ekuphela kwento enganikeli ngexabiso eliphambili yiPrime Music - inikwe umda kwizigidi ezi-2, unokuqiniseka ukuba incasa yakho ye-eclectic ngakumbi ngekhe ifezekiswe. Iindaba ezimnandi zezokuba amalungu eNkulumbuso anganyusa kwiAmazon Music Unlimited (okhuphisana naye uqobo) nge $ 7.99 / mo., Ngelixa ixabisa i $ 9.99 / mo. Abasebenzisi abangengabo iiNkulumbuso.
Kwaye, ewe, uyafikelela kwi-Prime Day, olusuku lokuthenga olugezayo. Kodwa ufumana izaphulelo kuphela ukuba ulilungu eliyintloko. Gcina ujonge ukujongana nini Inkulumbuso iyasondela! Kuza kufuneka kupholile Iifowuni ze-Prime Day , Idili leTV kwaye Imicimbi yeBluetooth yentloko phakathi kwabanye abaninzi, ke hlala ubukele!
Eyona nto iphambili ye-iphone se manzi
I-Walmart inesivumelwano esikhethekileyo kwi-Apple iPhone 6 kunye ne-Apple iPhone 6 Plus yeNtetho eQhelekileyo
Uyikhuphela njani kwaye uyifakele uhlaziyo lwe-iOS 9 kwi-iPhone yakho ehambelanayo, kwi-iPad okanye kwi-iPod